သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်က၎င်းကိုဖြစ်နိုင်စေသည်
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ 2018-01 > သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ဒါကြောင့်တတ်နိုင်သမျှစေသည်
သင်၏ "သက်သာရာရဇုန်" မှထွက်ပြီး ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ကိုးစားရန် အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ ပြင်းထန်သောမုန်တိုင်း၏အလယ်တွင် ပေတရုသည် လှေ၏ဘေးကင်းရာနေရာမှ ထွက်ခွာသွားသည်။ သူသည် ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့ပြီး “ရေပေါ်မှာ လျှောက်လှမ်းခြင်း” (မဿဲ ၁)၊4,25-31) ။
တစ်ခုခုနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုတာကိုသင်ငြင်းဆိုနေတဲ့အခြေအနေကိုမင်းသိလား။ ငယ်ငယ်တုန်းကကျွန်တော့်မှာအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်။ ငါ့ညီရဲ့အခန်းထဲပြတင်းပေါက်ကိုငါဖောက်ခွဲလို့ရမလား။ ဘာလို့ငါ့ကို မဟုတ်ဘူး! “ ငါဟာတင်းနစ်ဘောလုံးနဲ့အတူနောက်တံခါးတစ်ခုရဲ့အပေါက်မှာအပေါက်တစ်ပေါက်ပေါက်နေသလား။ မဟုတ်ဘူး! ရောမemကရာဇ်မင်းရဲ့တော်လှန်ရေးသမား၊ ဆန့်ကျင်သူ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ရင်ငါကော။ "ဒါပေမယ့်ငါမဟုတ်ဘူး!" ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်တွင်အဖမ်းခံရပြီးနောက်ပေတရုသည်ခရစ်တော်အားငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ ဤငြင်းဆိုမှုကလူသည်မည်မျှအားနည်းနေသည်၊ မည်သည့်အရာကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိကြောင်းပြသသည်။
ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝသောပေတရုသည် ယေရုရှလင်မြို့၌စုဝေးသောလူတို့အား ရဲရင့်စွာဟောပြောခဲ့သည်။ ပဋိညာဉ်သစ်အသင်းတော်ရှိ ပင်တေကုတ္တေပွဲ၏ပထမနေ့တွင် ဘုရားသခင်နှင့်ဖြစ်နိုင်သောအရာကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပြသသည်။ ပေတရုသည် သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်၏ အလုံးစုံကို သိမ်းပိုက်နိုင်သော တန်ခိုးတော်ဖြင့် ပြည့်နှက်နေသော သူ၏ သက်တောင့်သက်သာဇုန်မှ ဒုတိယအကြိမ် ထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။ “ထို့ကြောင့် ပေတရုသည် တကျိပ်တပါးသောလူတို့နှင့်အတူ ပေါ်လာ၍ အသံကိုလွှင့်၍ မိန့်တော်မူ၏။” (တမန်တော်ဝတ္ထု၊ 2,14) ဤသည်မှာ ပေတရု၏ ပထမဆုံးတရားဒေသနာဖြစ်သည်—ရှင်းလင်းပြတ်သားပြီး စွမ်းအားရှိသမျှဖြင့် သတ္တိရှိရှိ ဟောပြောခဲ့သည်။
ပtheိညာဉ်သစ်၌တမန်တော်များ၏လုပ်ဆောင်မှုအားလုံးကိုသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏တန်ခိုးဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မရှိလျှင်သတေဖန်သည်သူ၏ဆိုးဝါးသောအတွေ့အကြုံကိုခံရပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ယေရှုခရစ်၏နာမတော်ကိုကြွေးကြော်ရန်အတားအဆီးအားလုံးကိုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့သည်။ သူ၏ခွန်အားသည်ဘုရားသခင်ထံမှလာသည်။
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်စွန့်ခွာပြီးအားနည်းနေတာ၊ သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်၏စွမ်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဘုရားသခင်ရည်ရွယ်ထားသမျှကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိသည်။ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏“ နှစ်သိမ့်မှုဇုန်” မှ“ လှေ” မှထွက်ခွာရန်နှင့်ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားအလင်း၊ ခွန်အားနှင့်လမ်းညွှန်ပေးလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်စိတ်ချစေသည်။
ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်နှင့်သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်၏ဆုကျေးဇူးများကြောင့်သင်၏ရှေ့သို့တိုး။ နှစ်သိမ့်မှုဇုန်မှထွက်ခွာရန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်နိုင်သည်။
Philipper Gale ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်